တေးသီချင်းများကိုလွှင့်ရန်ဂူဂဲလ်တိမ်တိုက်ထဲသို့တင်ပို့နည်း။ | Androidsis
သင်၏ Terminal အားလုံးတွင် Streaming အဖြစ်နားထောင်ရန်အတွက်သင်၏တေးဂီတကိုမိုto်းတိမ်ထဲသို့ဘယ်လိုတင်မည်နည်း။ အခမဲ့ !!
Francisco Ruiz | | အခမဲ့ဂီတ, လဲ tutorial
ဒီ post အသစ်မှာမင်းကိုသင်ပေးမယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတအားလုံးကို streaming ဖြင့်နားထောင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏တေးဂီတအားလုံးကိုမိုin်းတိမ်၌သိုထားရန်နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည် မည်သည့် Android၊ iOS စက်သို့မဟုတ်မည်သည့်ကွန်ပျူတာအမျိုးအစားတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့၏ Google account ဖြင့် log in လုပ်ရုံဖြင့်အသံ။
ဤသီချင်းနှစ်မျိုးလုံးကိုအခမဲ့နှင့်အခကြေးငွေပေးစရာမလိုပဲ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကိုငှားရမ်းခြင်းမလိုဘဲ Cloud တွင်သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည့်နည်းနှစ်နည်းမှာအောက်ဖော်ပြပါဗီဒီယိုသင်ခန်းစာနှစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ယခုသင်သိ, သူတို့ထဲကတစ်စုံတစ်ခုကိုလက်လွတ်မ !!
1 ပထမ ဦး ဆုံးနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနည်းမှာမကြာမီကျွန်ုပ်တို့စာကြည့်တိုက်ကိုနည်းလမ်း ၂ သို့ရွှေ့ပြောင်းစေနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတကို Google Play Music အသစ်သို့တင်ပါ
2 နည်းလမ်း ၂ - သင့်တေးဂီတကို Youtube Music သို့တင်ရန်နည်း။ (နည်းလမ်းနှစ်မျိုး)
ပထမ ဦး ဆုံးနည်းလမ်းကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနည်းမှာမကြာမီကျွန်ုပ်တို့စာကြည့်တိုက်ကိုနည်းလမ်း ၂ သို့ရွှေ့ပြောင်းစေနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတကို Google Play Music အသစ်သို့တင်ပါ
ဒီလိုင်းတွေကိုအထက်မှာချန်ထားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာလိုက်နာရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့တယ် သင်၏သီချင်းများကို Google Play Music Cloud သို့အခမဲ့တင်ပါPlay Music အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပြီးဂူဂဲလ်အကောင့်ထဲကိုဝင်ပြီးကိုယ့်ဂီတကိုမိုးတိမ်ထဲ upload တင်မယ်။
မှတ်သားရန်လိုသည်မှာဤရွေးချယ်မှုအတွက်နှင့်ကျွန်ုပ်ဤပို့စ်တွင်ကျွန်ုပ်ရှင်းပြခဲ့သောဒုတိယရွေးစရာအတွက်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂီတကိုကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာဖြင့်တင်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤကိစ္စတွင် Google Play Musioca စာမျက်နှာကိုဤလင့်ခ်ကို နှိပ်၍ ဖွင့်နိုင်သည်:
Google Play တေးဂီတကိုသုံးပါ
ဤနည်းလမ်း၏အားနည်းချက်မှာဒုတိယနှင့်မတူဘဲဖြစ်သည် ထပ်ခါတလဲလဲထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ င်ရောက်ရန် Paypal (သို့) ခရက်ဒစ်မှတစ်ဆင့်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်အကောင့်မှယူရိုတစ်ခုတည်းကိုနှုတ်ယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။။ တစ်လအခမဲ့အခမဲ့ဝယ်ယူပြီးတစ်လလျှင်ယူရို ၉.၉၉ ကျသင့်သောဂူးဂဲလ်ပလေးဂီတကိုနာမည်ကြီးစာရင်းသွင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့မလိုအပ်ပါ။
ဤနည်းလမ်း၏ကောင်းကျိုးများအနက်မှတစ်ခုမှာလျှောက်လွှာကိုဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အခြားဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ခွဲထုတ်ခြင်း၌ဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ စာရင်းသွင်းစရာမလိုဘဲကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်တိမ်တိုက်ထဲသို့ကျွန်ုပ်တို့တင်ပို့သည့်တေးသီချင်းအားလုံးကိုအမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးဖြင့်သီချင်း ၅၀,၀၀၀ အထိရယူနိုင်သည်။၊ ပစ္စည်းဆယ်ခုအထိပြanyနာမရှိဘဲနားထောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်စဉ် အခြေခံ၍ မှတ်ပုံတင်နိုင်သည့်အများဆုံးကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။
Application သို့မဟုတ် Google Cloud သို့ဤနည်းလမ်းတင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြားကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပီစီတွင်ဖိုလ်ဒါများထားရှိခြင်းကိုခွင့်ပြုထားပါသည်။ သို့မှသာဂီတအကြောင်းအရာအသစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါက၎င်းသည်ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတတိမ်တိုက်သို့အလိုအလျောက်တင်ပါလိမ့်မည်။.
မကောင်းတဲ့အရာ ငါနှစ်ပေါင်းများစွာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအသုံးပြုခဲ့ကြသောဤစနစ်နှင့် အကယ်၍ သင်အောက်တွင်ထားခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုကိုသင်မကြည့်ပါက၊ လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကအထူးသဖြင့်ဇွန် ၁ ရက်၊ 1 တွင်မှတ်တမ်းတင်ထားသောဗီဒီယိုတစ်ခု။
ငါအများကြီးကြိုက်တယ်၊ ဒီဒုတိယထက်အများကြီးပိုတဲ့ system ကိုအခုငါပေးမယ်။ ဝေးလံခေါင်သီသောဝေးလံသောအနာဂတ်တွင်ပုံသေဖြစ်နေဆဲဖြစ်သော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားသည် ဂူဂဲလ်ကတည်းကငါကဒီဟာကိုဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုနှစ်ခုကိုတစ်ချိန်တည်းမှာစီးဆင်းစေတာထက်အများကြီးပိုကြာတယ်ဆိုတာမယုံဘူး။
မကြာခင်မှာဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအသစ်တစ်ခုမှာမင်းရဲ့ဂီတကို Google Play Music ကနေဘယ်လိုရနိုင်မလဲ၊ မင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်ချင်ရင်၊ သင်၏ဂူဂဲလ်ပလေးဂီတတိမ်တိုက်ထဲ၌သိမ်းထားသောသင်၏ဂီတအားလုံးကို YouTube Music Cloud သို့လွှဲပြောင်းပါကျွန်ုပ်အကြံပေးမည့်ဒုတိယနည်းလမ်းဖြစ်သောဂူးဂဲလ်၏ streaming ဂီတ ၀ န်ဆောင်မှုသည်ယခုသင်အားသင်၏ဂီတစာကြည့်တိုက်တစ်ခုလုံးကို Cloud ပေါ်သို့လုံးဝအခမဲ့တင်ခွင့်ပြုသည်။
နည်းလမ်း ၂ - သင့်တေးဂီတကို Youtube Music သို့တင်ရန်နည်း။ (နည်းလမ်းနှစ်မျိုး)
ဤနည်းလမ်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းစနစ်ဖြစ်ပြီးစိတ်နှလုံးထဲမှသင့်အားစကားမပြောခဲ့လျှင်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုအဖြစ်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသင့်သည်ကျွန်ုပ်သည် Google Play Music ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ မ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံရပါမည်။ ကျွန်ုပ်၏အမှန်တရားသည်အလွန်စိမ်းလန်းဆဲဖြစ်သည့်တိုင်တရားဝင် YouTube Music application နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းအားကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအရာအားလုံးပိုမိုကောင်းမွန်သည်ကိုမြင်ရပါသည်။ အနည်းဆုံးဒီသဘောမျိုးသို့မဟုတ်ဤအပိုင်း၌တည်၏ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဂီတကိုမိုin်းတိမ်၌သိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားပါ၊ သင်ကအခမဲ့နားထောင်နိုင်သည်, YouTube ပရီမီယံအသုံးပြုသူဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲမျက်နှာပြင်ပိတ်ပြီးဂီတကိုဆက်လက်နားထောင်နိုင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်.
လျှောက်လွှာနှင့်တွေ့ရသည့်မကောင်းသောအရာမှာ၎င်းသည်ဂီတကို streaming တွင်နားထောင်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူ YouTube Music မှကြော်ငြာများကိုအခမဲ့နားထောင်ရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်ကိုပိတ်နိုင်ခြင်းကဲ့သို့သောကန့်သတ်ချက်များနှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, အနည်းဆုံးယခုအချိန်အထိကျနော်တို့ဂီတကိုအလိုအလျှောက် upload တင်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကွန်ပျူတာပေါ်ရှိမည်သည့်ဖိုလ်ဒါကိုထပ်တူပြုရန်ခွင့်မပြုပါ, ထို့ကြောင့်၎င်းကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြစ်စေ၊အနည်းဆုံးယခုအချိန်တွင်သည်။
သင်တို့အားငါပြောသကဲ့သို့, ငါသည်သင်တို့ကိုဤလိုင်းများအထက်ရုံငါစွန့်ခွာသောပူးတွဲပါဗီဒီယိုထဲမှာငါမှလိုက်နာရန်ဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြပါ သင်၏တေးဂီတကိုတစ်ဆင့်ချင်းတေးဂီတ Youtube သို့တင်ပါသင်၏ဂီတကိုတင်ပြီးသောအခါ၊ ၎င်းသည်သင်၏ Android၊ iOS ထုတ်ကုန်များသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်၎င်းကိုနားဆင်နိုင်စေရန် app / web ကို ဝင်ရောက်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောဂူဂဲလ်အကောင့်နှင့်ဝင်ရောက်ခြင်းအားဖြင့်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » သင်၏ Terminal အားလုံးတွင် Streaming အဖြစ်နားထောင်ရန်အတွက်သင်၏တေးဂီတကိုမိုto်းတိမ်ထဲသို့ဘယ်လိုတင်မည်နည်း။ အခမဲ့ !!
သင်၏ Android ကိရိယာအတွက်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး
Pixel 4a သည် eMMC အစား UFS 2.1 သိုလှောင်မှုကိုပေးလိမ့်မည်